Kedu ihe bụ Neuro Design? | Martech Zone
Nhazi Neuro bụ mpaghara ọhụụ na-eto eto nke na-etinye nghọta sitere na sayensị mmụta sayensị iji nyere aka mepụta atụmatụ dị irè karị. Echiche ndị a nwere ike isi na isi mmalite abụọ:
Principleskpụrụ izugbe nke Neuro Design kacha mma omume nke enwetara site na nyocha agụmakwụkwọ banyere usoro nyocha mmadụ na akparamaagwa nke ọhụụ. Ndị a na-agụnye ihe ndị dị ka akụkụ nke ebe anyị na-ahụ anya na-eleba anya maka ịchọpụta ihe ndị a na-ahụ anya, si otú a na-enyere ndị na-emepụta aka idebe onyonyo ndị ka mma.
Designlọ ọrụ na-ere ahịa na ahịa, yana ndị nwere akara ngwa ahịa, na-arịwanye elu na-enye nyocha nyocha nke onwe ha inyochaa kpọmkwem imewe nhọrọ. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na a ika na-eche echiche nke kpamkpam ume ha nkwakọ imewe, ha nwere ike chọọ nwalee ọtụtụ imewe ọdịiche, iji na-eji ọkụ na-amata nke na-egosi ihe ndị kasị nwere.
Na omenala, nyocha ndị na-azụ ahịa ga-abụrịrị ịjụ ajụjụ, dị ka:
N’ime ihe ndị a, olee nke masịrị gị na gịnị kpatara ya?
Otú ọ dị, nnyocha ndị ọkà mmụta sayensị na-akụzi egosiwo na anyị nwere ikike a kpaara ókè iji mara nke ọma ịghọta ihe mere anyị ji amasị ihe oyiyi ụfọdụ. Akụkụ nke a bụ n'ihi na ọtụtụ ọrụ ụbụrụ anyị na-eme iji dozie ma ghọta ihe onyonyo bụ ihe nzuzo; anyị bụ ndị na-amaghị na ya, dị ka anyị ghọrọ usoro nwere ngwa ngwa mmeghachi omume ihe anyị na-ahụ.
Anyị niile maara ụzọ mmegharị mberede na anya nke anya anyị nwere ike isi wute anyị - nghọta anyị ketara eketa iji chebe anyị pụọ n'aka ndị na-eri anụ - mana enwerekwa ajọ mbunobi ndị ọzọ. Iji maa atụ, anyị na-eme ngwangwa (ọkara ọkara ọkara) nke ihe onyonyo na atụmatụ dị iche iche, ma anyị ga-ahụta ha ma ọ bụ na ha ekwetaghị. Ihe omuma ndi mbu a, nke putara ihe karie echiche na omume ndi ozo banyere imewe.
Ihe na - eme ka nke a bụrụ nsogbu nye ndị na - eme nchọpụta na - eji ajụjụ a maara nke ọma bụ na ebe anyị amataghị ụdị mm ụta ndị a, anyị amaghị na anyị amaghị! A na - akpalikarị anyị mkpa igosipụta na njikwa omume anyị na ka omume ahụ wee bụrụ ihe na - agbanwe agbanwe ma bụrụ ihe ezi uche dị na ya na ndị ọzọ.
N’ụzọ dị iche, ọtụtụ n’ime ihe ndị anyị na-eme mgbe anyị na-eme ihe n’echiche bụ ihe na-enweghị isi na uche anyị. Kama ịsị 'Amaghị m ihe kpatara m ji meghachi omume ahụ na ụdị ahụ', ma ọ bụ 'Amaghị m ihe kpatara m ji họrọ ngwaahịa ahụ na nnukwu ụlọ ahịa ma e jiri ya tụnyere nke ọ bụla n'ime ndị asọmpi', anyị na-eme ihe ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-akpọ ' confabulate ': anyị mepụtara nkọwa ezi uche dị na ya maka omume anyị.
Idozi Omume Na-eche ihu
N'ụzọ dị iche, usoro nyocha nke nyocha neuro adịghị ajụ ndị mmadụ ka ha jiri akọ chee ihe kpatara ha ji amasị ihe oyiyi, kama nke ahụ, ọ na-akpali mmeghachi omume ndị mmadụ n'ọtụtụ ụzọ amamihe. Offọdụ n'ime ndị a bụ nha ezi uche nke ndị mmadụ ka ha na-ele ihe onyonyo, na-eji nyocha fMRI ma ọ bụ okpu eji arụ ọrụ EEG. Enwekwara ike iji igwefoto na-enyocha anya wee tụọ ebe anyị lere anya na onyonyo ma ọ bụ vidiyo. Usoro a na-akpọ Idozi Omume Na-eche ihu na - enweta ihe omuma banyere mmeghachi omume mmetụta uche anyị na onyonyo site na-agbanwe ngbanwe oge na akwara nke ihu anyị (dịka ngosipụta ihu nke mmụọ).
Nnwale nzaghachi zuru ezu
Lesszọ ọzọ amachaghị ma dị ike, akpọ Nnwale nzaghachi zuru ezu, na-atụle mkpakọrịta anyị na-akpaghị aka n'etiti ihe oyiyi ọ bụla na okwu ọ bụla - dị ka okwu na-akọwa mmetụta, ma ọ bụ otu n'ime ụdị ihe oyiyi ahụ na-ezube ịkpalite. Ike nke usoro dị ka nsuso anya, Usoro Nhazi ihu, na Nnwale Mmeghachi Omume, ha niile nwere ike ịntanetị, na-eji kamera weebụ na kọmpụta ụlọ ma ọ bụ mbadamba. Ọgbọ ọhụụ nke usoro nyocha a na-eme ka o kwe omume ịnwale ọtụtụ narị ndị na-azụ ahịa na ọnụ ala dị ala karịa iweta ndị mmadụ n'ime ụlọ nyocha maka nyocha ụbụrụ.
A na-eji nyocha ọhụụ Neuro na nghọta eme ihe ugbu a site n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche n'ọtụtụ ụdị imepụta. Ebe nrụọrụ weebụ, nkwakọ ngwaahịa nnukwu ụlọ ahịa, imepụta ngwaahịa, na akara ngosi akara bụ n'etiti ọtụtụ mpaghara nke nyocha nyocha nyocha. Otu ihe atụ bụ nnukwu ụlọ ahịa Tesco. O jirila ọtụtụ usoro nyocha nyocha nke neuro iji bulite usoro nkwakọ ngwaahịa ọhụụ maka ụdị nri kacha mma 'kachasị mma'.
Stkwalite ikike nke ngwugwu iji dọta uche na ụlọ ahịa, yana iji kparịta ezigbo agwa dị mma. Ihe omuma atu bu ulo eji emeputa ihe London, Saddington Baynes. Ugbu a, ha na-agba ọsọ ule na-aza ajụjụ iji nyere aka ịghọta nke ọma otu ndị mmadụ si aza echiche ha mgbe ha na-azụlite ha, wee mezie atụmatụ ha n'ụzọ kwekọrọ na ya.
Ebumnuche Neuro abụghị iji dochie ihe okike, mmụọ nsọ ma ọ bụ mmụọ nke ndị na-emepụta mmadụ. Ọ bụ ngwa ọrụ ọhụụ ọhụrụ iji nyere aka bulie nghọta nke onwe ha na otu ndị ahịa ga-esi meghachi omume na echiche ha. Ndị omenkà na ndị na-ese ihe nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na iwere teknụzụ ọhụụ iji bulie ọrụ ha. Ntughari aka nwere ike inyere ha aka site na ịgbatị nkà ha nke ọma n'otu ụzọ ahụ ngwaọrụ dịka Photoshop si agbatị nka ha.
Banyere Akwụkwọ: Neuro Design
Taa, azụmaahịa dị iche iche na-ewepụta nnukwu ihe okike na ọdịnaya ọdịnaya, gụnyere weebụsaịtị, ngosi, vidiyo na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu, gụnyere Procter & Gamble, Coca-Cola, Tesco na Google, na-eji nyocha neuroscience na echiche iji bulie ọdịnaya dijitalụ ha. Neuro Design: Neuromarketing Insights iji bulie njikọ na uru, mepee ụwa ohuru nke neuromarketing chepụtara echiche na nkwanye, ma kọwaa nghọta sitere na ngalaba neuroaesthetics na-eto eto nke ga - enyere ndị na - agụ akwụkwọ aka ịkwalite mmekọrịta ndị ahịa na weebụsaịtị ha ma bulie uru.
Zọpụta 20% na koodu ego BMKMartech20
Tags: Nlelenjikọ akaanya nsusoIdozi Omume Na-eche ihufMRINnwale nzaghachi zuru ezuihe eji eme iheneuromarketingneuromarketing imeweurunjirimara